Real Madrid oo dib u heli karta adeega Carvajal iyo Marcelo kulanka… – Gool FM
(Madrid) 01 Feb 2017. Labada daafac ee lagama maarmaanka u ah Real Madrid ee Dani Carvajal iyo Marcelo ayaa lagu wadaa inay usbuuca soo socda dib ugu soo laabtaan tababarka kooxda ka hor inta aysan garoomada ku soo laaban kulanka Napoli ee Champions League.
Daafaca reer Brazil ayaan ka soo muuqan safka Zidane tan iyo dhaawicii ka soo gaaray kulankii ay la yeesheen Malaga 21-kii Janaayo, halka daafaca reer Spain ay garoomada ugu dambeysay kaddib dhaawac ka soo gaaray guul daradii Los Blancos ka soo gaarta naadiga Sevilla.
Yeelkeede, labada daafaca ayaa ka soo muuqan karaya shaxda Real Madrid kulanka Napoli ee 15-ka bishan ee ka dhici doona Estadio Santiago Bernabeu, lugta hore ee wareega 16-ka Champions League.
"Ronaldo wey dhaawacdaa foorida jamaahiirta".
Xiliciyaareedkii Bonaventura oo soo dhamaaday